Method ကို Orthodidacte အတူသာလျှင်တစ်ခုမှာစာလုံးပေါင်းအမှားတွင်ပိုမို Make သလား
Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
သင်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မားအလုပ်ရှင်များအားဖြင့်တန်ဖိုးကြီးကြသည်ကိုသိသလား? ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာ Form ကိုအလုပ်တစ်ခုလေယာဉ်ဆင်းသက်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Orthodidacte နည်းလမ်းမှတဆင့်, သင်မေးလ်အားဖြင့်သင့်ကုန်သွယ်အတွက်အမှားတွေလုပ်မပေးဖို့အားလုံးကိုအရှိဆုံးအရေးပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူနေဖြင့်စာအရေးအသား၌သင်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရညျအသှေးကိုမကြာခဏပြုလုပ်သင့်ရဲ့လှူဒါန်းမှုဆက်ဆံပါနှင့်သင့်ဝေါဟာရကြွယ်ဝစေရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, တစ်ဦးန်ထမ်းများ၏အလေးမှ attests ။
ပြင်သစ်ဘာသာစကား၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာယနေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆုံးအဖြတ်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စာလုံးပေါင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပုံရသည်အတိုင်းရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီကဏ္ဍအားလုံးတွင်တလွှားကုမ္ပဏီအများအပြားမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်သင်တို့အဘို့လျှောက်ထားပါတယ်ထားတဲ့များအတွက်အလုပ်အကိုင်အ, သင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသင်သည်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့်ချက်ချင်းထွက်မတ်တပ်ရပ်စေ။ အားလုံးအသက်မွေးဝမ်းမကြာခဏအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏လေးနက်မှုကိုထင်ဟပ်စေအဟောအပွောကောငျး, အဘို့ဤစိုးရိမ်ပူပန်နေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာနေကြသည်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းစာလုံးပေါင်းအမှားနှင့်တစ်ဦးထိခိုက်ကြာသောတစ်ခုလုံးကိုသင်ကြားမှုများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုပါ! ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကသင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, ပြင်သစ်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုအတည်ပြုစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါနည်းလမ်းကို Orthodidacte ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုဖြစ်ပါသည်
တဦးတည်းစာလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း၏နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်တစ်ခုချင်းစီကိုစကားလုံးရှုပ်ထွေးစကားတစ်ခွန်းနှင့်အတူသတ်ပစ်ရန်အသုံးပြုပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသား Orthodidacte အပေါ် fit ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းဆိုစိတ်ဖိစီးမှုမရှိပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးတစ်ဦးကိုယ်ပိုင်သင်တန်းရှိသည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းဦးခေါင်းအတွက်စာလုံးပေါင်းနည်းပြရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့စုံလင်သည်။
အဆိုပါ Orthodidacte နည်းလမ်းကနေအဓိကအားထားသောသင်ယူနိုင်ခြင်း dyslexics အဘို့ဤစုံလင်သောစိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ရေးအကောင်းဆုံးသောပြင်သစ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်မှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာလျော့နည်းအခက်အခဲအရေးအသားထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖော်ပြရှိသည်သောကျောင်းသားများအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Orthodidacte သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်တစ်ခုတည်းဖော်မြူလာနှင့်အတူ၎င်း၏ဝေါဟာရတပုဒ်ကိုနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသိပညာမြှင့်တင်ရန်, သူတို့ရဲ့ level မှာ program တစ်ခုပေးထားပါတယ်။
သငျသညျစနစ်တကျ conjugation ကြိယာထွက်ရှာရန်စာလုံးပေါင်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားအတွက်အတိတ် participle နှင့်အခြား oddities ၏သဘောတူညီချက်များ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်တို့အဘို့မဆိုလျှို့ဝှက်ချက်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်တစ်ဦးမွမ်းမံစာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါအဆင့်ကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင် Orthodidacte အားလုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအကွာအဝေးပညာရေးနှင့်အတူ, သငျသညျအရေးအသား၌သင်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုးတက်လာဖို့အခက်အခဲမရှိဘဲရောက်လာ။
ပြင်သစ်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းနှင့်အခြေခံအကျဆုံးစည်းမျဉ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နောက်ကျလွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအထူးပြုဘာသာရပ်များအတွက်သင်ကြားပို့ချပေးသည်။ ထို့ကြောင့်အမှားမကျူးလွန်ရန်သင်စုဆောင်းထားသောသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ် syntactic automaticisms ကို set up လုပ်ရန်အခြားသူများကိုပင်သင်ရှာဖွေသည်။ ဤအရာသည်နောင်တွင်သင်အမြဲတမ်းလုပ်မိသောအမှားများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအမှားများကိုနောင်တွင်တားဆီးလိမ့်မည်။
ကိုယ့်လက်ရှိပြင်သစ်ဘာသာစကား၏ရိုးရှင်းသင်ယူမှုကပ်မနေပါနဲ့! ပြင်သစ်အနုပညာနှင့်ပရိယာယ်နှင့်အတူကကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူဖို့ဘာသာစကားသင်တန်းများဖြည့်စွက်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ကြနဲ့ဆက်ဆံပါ။ ဝေါဟာရတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဘာသာစကားအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်အများအပြားလဲ tutorial နှင့်အတူ, Orthodidacte တစ်ဦးအထင်ကြီးတိုးသင့်ရဲ့ဝေါဟာရများ၏ပေါများကြွယ်ဝအာမခံပါသည်။
မြန်နှုန်းဖြုတ်ရန်ဖို့နေ့တိုင်း Lyrics နှင့်သြဇာလမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ပြင်ဆင်ပါ! သငျသညျပွငျသစျထဲတွင်တစ်ဦးမွမ်းမံသင်တန်းစတင်ချင်လျှင် platform ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆိုပါသင်တန်းများကိုလည်းကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ ဝေါဟာရယခုဉာဏချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံးအသစ်သင်ယူခြင်းလည်းသင့်ရဲ့ဝေါဟာရနှင့် semantic အသိပညာတိုးပွားစေ။ ဒါကြောင့်မဆုံးရှုံးစေရန်နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုရရှိနိုင်ဖွယ်ရာမရှိ။
အဆိုပါ Orthodidacte နည်းလမ်းအမှန်တကယ်အွန်လိုင်းမှလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရပ်ဌာန-မျက်နှာယူမထားဘူး။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ဘာသာစကားချို့ယွင်းချက်တွေ့ဆုံရန်ကူညီရန်သို့ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်း၏မီးမောင်းထိုးပြကအများကြီးရှိနိုင်ပါဒီဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်များကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်တန်းကိုရှာဖွေ, ဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ရေး, ဒါပေမယ့်လည်းကျော်စာဖြင့်ရေးသား။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်, MCQ နှင့်သတ်ပုံခေါ်ခြင်းသည်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။
သငျသညျ Orthodidacte အပေါ်လိုကျလြှောကျနိုငျသောပြင်သစ်သင်တန်းများသင်တစ်ဦးအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ခွင့်ပြုရန်လုံလောက်သောဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိတော့လက်ခံနိုင်ဖွယ်စာလုံးပေါင်းနှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတစ်ခုမူရင်းအရည်အချင်းကိုနှင့်သင့် CV ကိုမြှင့်တင်ရန် uninteresting ဝေးထည့်ပါ။ မည်သို့ပင်သင့်အဆင့်, သင်သည်သင်၏ရာထူးမှအဆင်ပြေအောင်သင်ခန်းစာများတွေ့လိမ့်မည်။ လူတိုင်းမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့စတင် point ရဲ့၎င်း၏အကောင့်ကိုရှာဖွေဖို့သေချာပါသည်။
သင်၏စီမံကိန်းသည်လက်မှတ်ဗော်တဲယားတက်ကောက်နေအားဖြင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ရှေ့ဆက်သွားပါ။ ဤအဖိုးဒီပလိုမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ပြင်သစ်၏စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါ၏အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့အသိပညာ certifies ။ အဆိုပါ Orthodidacte နည်းလမ်းကိုသင်နှင့်အတူလိုက်ပါနှင့်သင်ဤစိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်စီစဉ်ထားလျှင်သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ကဒီစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့တစ်ဦးပြည့်စုံ program ကိုရှာဖွေပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူသွားသေချာပါစေ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပွငျသစျထဲတွင်သင်တို့၏ကောင်းသောအဆင့်ကိုသက်သေပြနှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်ထက်ပိုမိုလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လာဖို့အောင်မြင်မှု၏အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးပါ။
ဖတ်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကို စာတစ်စောင်နှင့် ခွဲခြားပါ။
နောက်တစ်စက္ကန့်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ သင်၏သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းအသိပညာကိုထောက်ခံရန်ဒဏ္legာရီဆန်သောလက်မှတ်ရရန်အခွင့်အရေးယူပါ။ သင်၏အလုပ်အကိုင်သည်ဆယ်ဆတိုးလာသည်။ မင်းမှာဘာမှဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီအကွာအဝေးပညာရေးကသင့်အတွက်သင့်မသင့်လားဆိုတာကိုမေးဖို့ Orthodidact နည်းလမ်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
Method ကို Orthodidacte အတူသာလျှင်တစ်ခုမှာစာလုံးပေါင်းအမှားတွင်ပိုမို Make သလား ဇန်နဝါရီလ 18th, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောစျေးပေါအားလုံး Matters တွင်သင်တန်း!
အောက်ပါအဆိုပါအစီရင်ခံစာ:4မရှိမဖြစ်အမှတ်အဆိုပါအောင်မြင်မှုသည်ကိုသိရန်